‘सरकारको बाहुबली शासनविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्छौँ’ - चारदिशा
‘सरकारको बाहुबली शासनविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्छौँ’
June 5, 2019 चारदिशा देश,बिबिध
डा. गोविन्द केसीको चेतावनी
काठमाडौँ – केही समय यता मौन रहेका सामाजिक अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको संरक्षण र द्वन्द्वपीडितको माग संबोधनमा गम्भीर नबने सरकारविरुद्ध जस्तो सुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका गैर–लोकतान्त्रिक तथा निरंकुशता – उन्मुख कदमहरुविरुद्ध आफू फेरि पनि बोल्न बाध्य हुने उनले एक विज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ ।
यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आयोगको ऐनमाथि आएको संशोधन प्रस्ताव हटाउनु पर्ने उनले माग गरेका छन् ।
उनले संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरुले माग गरे बमोजिम सम्बन्धित ऐनहरुमा संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञको नियुक्ति गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै उनले माफियामुखी प्रावधानहरुसहित जबर्जस्ती संसदबाट पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
जनयुद्धका पुर्वलडाकु निर्मला बिक नारकीय जीवन बिताउँदै
मोदीले दर्शन गरेपछि मुक्तिनाथमा भारतीय तीर्थयात्रीको संख्यामा वृद्धि